USergey Zharkov: ubomi bomntu, isithombe. Udokotela uSergei Zharkov: usapho, umfazi, abantwana, iindaba zakutshanje
Ubunono nobomi bomntu we-actor uSergey Zharkov
Ngomdlali onetalente kunye nomntu omhle uSergey Zharkov ulwazi oluncinane. I-Scanty embalwa imigca ye-biography, ingxoxo engabonakaliyo kunye nomdlali wecala ngokwakhe malunga neendima ezadlala kunye nokukhangela kwiifoto, ukubhoboza kwithambo. Ubomi bomntu uSergei Zharkov uhlelwa kubalandeli. Akayambathanga intsimbi yokubambisana kwaye akabonakali phambi kweparazzi ngokumkela kunye nomfazi wakhe okanye kunye nobuhle obuhle. USergei akayithandi ubomi boluntu, kwaye intatheli zizama ukuphepha. Siza kuzama ukuqokelela ulwazi ngedata kwaye sifumane oko umdlali othakazelisayo efihliweyo.
USergei unenkwenkwezi ezininzi kwiifilimu, kodwa emva kwenkqutyana ethi "Isibetho" kunye ne-melodrama "Uthando Olubi" lwavulelwa abalandeli kwicala elitsha. Udlale kakhulu u-Alexei Chumov no-Lovelace Vadim, ukuba abalandeli bafuna ukwazi konke ngoSergei. Ngokuphathelele "umkhonto ngaphandle kokwesaba nokuhlambalaza" kunye "nomntu wokuqala kwidolophana", neengcamango azihambanga, kwaye umfazi, abantwana, ziyimfihlelo ngeempawu eziyisixhenxe abafuna ukuzenza. Mhlawumbi isisombululo kwiimfihlelo zobomi bobucala bukaSergei Zharkov bufihliwe kwiindima zakhe ezintle? Umdlali wecala wavuma ukuba nganye kwiindima uxelela abalandeli bakhe ngaye.
Malunga neetalenta zomdlali weentente uSergey Zharkov
Wazalelwa eSt. Petersburg ngowe-1979. Emva kokuphumelela kwisikolo esiphakamileyo esikolweni esiphambili, wangena kwiziko lezemidlalo. Kwiminyaka eyi-15 kamva uvuma ukuba ukuba kwakungekho kulo mba, wayengayi kuba edala edala. Kodwa ngakumbi kule kamva. Ngomnyaka we-2001 waphumelela kwisikolo waza waya kwindawo yokudlala, kodwa wasebenza apho kuphela iminyaka emithathu waza washiya isinkwa samahhala. Sebenza kwi-arhente yecandelo lika-Irina Apeksimova, apho wafika emva kokuxothwa kwakhe, wamnika uqale ebomini. Umdlali weqhawe wayeqaphele kwaye waqala ukumenywa ngenxaxheba enkulu.
Ngendima nganye edlalwa it talente kaSergey Zharkov yanda, kwaye kunye nenani labalandeli. Abafazi bafuna ukwazi iindaba zakutsha malunga nosapho lwakhe lokwenene - umfazi kunye nabantwana bakhe-kwaye, ngokuqinisekileyo, malunga nezinto ezithandwayo. USergei Zharkov akasebenzi nje kuphela ukwenza iitalente. Inkwenkwezi kunye neenkwenkwezi zenkwenkwezi zibandakanya ngokukhwela ngehashe, zithanda ibhola yebhoksi kwaye inokwakheka kweyokuqala ebhokisini. Uqeqesho oluhle kakhulu lwezemidlalo lunceda kumabhayisikobho - zonke iinkcukacha uSergei wenza ngaphandle kokuphindwa kabini. Uyazi ukudubula ngokukhawuleza kwiintlobo zonke zezixhobo, ubalekele kwiintonga, ngokukhawuleza ukukhahlela kwiindonga kwiZhiguli endala.
Umdlali onobukrakra naye udlala ingqungquthela, ukudansa i-tango, i-modern, inyathelo, i-waltz kwaye ibulela ngokugqithiseleyo. Ingqungquthela engafaniyo yezwi yintetho eyahlukileyo, unokuyithandana nayo kanye kanye. Ngelizwi elinjalo, imithandazo yodwa ingoma phantsi kwefestile yowesifazane othandekayo!
"Umntu wokuqala kwidolophana"
Abafaki bakaSergei Zharkov, abajwayele ukubona umdlali wendima yee-bandits kunye ne-scumbags, bamangaliswa yintsebenzo yakhe ebalulekileyo kwinxaxheba entsha. Kwifilimu yomculo ethi "Uthando olubi," wayedlala inxalenye yakhe ngokungavamile, ehambisa yonke imiba yamava. Amawaka amabhinqa ayekholelwa ukuba i-macho engenakunyaniseki, engayazi ukungavumi, ingaba ngumntu onothando, othembekileyo nowomzwelo. Kuba njengasemva kwodonga lwamatye. "Lucky umfazi wakhe kunye nabantwana, uSergei Zharkov!" - bahlabelela abalandeli ngothando.
USergey Zharkov kunye neSibetho yiziqhawe zangethuba
USergei Zharkov waboniswa kwiingqungquthela ze-TV "Isibetho" esinomdlalo oqinileyo kunye nomoya ngaphandle kokugqithiswa, ukuba abalandeli beetalente zakhe "baxakeke" bekumangaliswe. Ifihla amandla, kwaye lo mdlali uzamangalisa wonke umntu ngaphezu kweyodwa. USergei Zharkov kungekudala kuya kufuneka amangaliswe-ngabafazi, abantwana, iindlovu kunye nazo zonke izifuyo ziya kuthethwa. Yaye ngokunyanisekileyo uya kuhlala ethule, ngakumbi ukuthetha ngobomi bakhe.
Umdlalo wakhe kwichungechunge elithi "Isibetho" sasiyifumene ngokucacileyo kwendima, yaye wayenomdla wonke umntu. Kwaye ngoku i-knight ngaphandle kokwesaba nokuhlambalazwa kwaye inyathelo ayikwazi ukunyathela ngaphandle kweentatheli zeendaba kunye ne-paparazzi.
Ubomi obudlulileyo nobomi bukaSergey Zharkov
Ndiyabulela indima ye-Alexei Chumov, abalandeli babenokubona enye yamathambo omdlali, ovalelwe kakuhle kwi-clock. I-90 yithuba lakhe, kwaye uyayikhumbula ngokuzimela. Kwiminyaka yesibetho kwafika ubuntwaneni bakhe nolutsha. Wahlala kwindawo yezobugebengu kwaye ii-arhente zokunyanzeliswa komthetho zazingumlenze omfutshane ... ngamapolisa kwakudla ngokuvalela umfana odibanayo.
Yena ngokwakhe kamva uyavuma ukuba walandela ukuziphatha ngaloo xesha. Umbuso uSergey Zharkov wawungumhlathi, nayo yonke into ayifumene kuyo - wazithatha. Wayekhuphisana kunye nabadlali bakhe beentlanzi - "wathatha isibhamu waza wadubula entloko". Zininzi izinto ezimbi zazingenako ukufumana wonke umntu, kuquka uSergei Zharkov.
Wayeneminyaka eli-15 ubudala, xa wangcwaba abahlobo abane ngomnye. Okwesine - umfundi ofunda naye, apho wayethanda khona. Kwaye ukuba bekungekho kwinqanaba lezemidlalo, iqhawe le-chum yexesha, mhlawumbi, laliya kubalandela. Ukwamkelwa kwiziko livule isahluko esitsha ebomini bakhe.
Kwaye umdlali wezona zinto zilungile, ikhaya elihle, umfazi omhle, abantwana ababini abantle. Umntwana wesibini uZharkov wazalwa ngokukhawuleza emva kokuqaliswa kwechungechunge ethi "Isibetho," esenza ngokukhawuleza udumo. Ufuna ukwazi ukuba kutheni uSergei Zharkov efihla ubomi bakhe - bukela iindaba zakutshanje! Umdlali omhle uqala nje ...
Indlela umculi uHana watshintsha ngayo: ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kwiplastiki
Yiyiphi intando yeplastiki eyenziwa nguSvetlana Loboda: iifoto ngaphambi nangemva kweplastiki
U-Ilya Glinnikov: iindaba zakutshanje zobomi bomntu wecala lokugqibela-2017 - uAralaya Tarasova, u-Christina Asmus kunye namanye amantombazana eenkwenkwezi. Ngubani na yena-umfazi waseGlinnikov?
Ubomi bomntu ka Sergei Lazarev: zonke iimfihlelo zomculi othandwayo
UAlexei Vorobyov emva komboniso "IsiGanga 4": ubomi bomntu, amantombazana, izicwangciso, umfanekiso
Njengomfazi oyimangaliso uGalot wase-Israel umqeshwa waba ngumdlali
Izinto eziphezulu ezi-3 oza kuzinxiba zonke ihlobo
Iphupha liliphi iphupha? Ukutolika kwiincwadi ezahlukeneyo zokuphupha
Umntwana akayidli kwi-kindergarten
Ikhekhe nge-persimmon kunye nekognac
Indoda ibancinci kakhulu - ngaba ikhona ikamva?
Indlela yokuzivocavoca ngokufanelekileyo ukufezekisa ukulahleka kwesisindo
U-Anastasia Volochkova utshitshise umfanekiso we-Natasha Koroleva okhulile kunye no-Natasha Koroleva
Izingoma zanamhlanje nezifutshane kunye nemibongo ye-Autumn Ball kubafundi besikolo. Iingoma ze-Autumn Ball malunga neAntumn
Yintoni eyonakalisa i-hairspray
Rucola, Parmesan kunye neSalama ham saladi
Ikhukhi kunye nama-walnuts
Iipropathi zokwelapha zesiginki sokulahlekelwa kwesisindo
Kutheni amaTaliyane adla i-macaroni
Shish kebab kusuka kwialmum